(Dhagayso)Madaxweynaha Soomaaliya oo Bogaadiyay Qorshaha Dhaqaalaha Dalkiisa. – The Voice of Northeastern Kenya
(Dhagayso)Madaxweynaha Soomaaliya oo Bogaadiyay Qorshaha Dhaqaalaha Dalkiisa.
Star FM September 27, 2018
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyey dadaallada Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ay ku bixisay dib u soo celinta kalsoonida beesha Caalamka ee ku aaddan hufnaanta hay’adaha maaliyadda dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in qorshaha iskaashiga wada jirka ah ee Soomaaliya iyo Golaha Bangiga Adduunka (2019-2022) uu ka tarjumayo horumarka dowlada dhexe ay ka sameeysay dib-u-habeeynta laamaha maaliyadda, kobcinta dhaqaalaha iyo sare u qaadista ilaha dakhliga gudaha.
Madaxweynuhu wuxuu Xukuumadda faray in fulinta dhamaan barnaamijyadaas horumarineed lagu jaan gooyo baahiyaha shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kobcinta ganacsiga dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo, kor u qaadida fursadaha waxbarashada, yareynta saboolnimada iyo xal u helida shaqo la’aanta ka jirta Soomaaliya gaar ahaan mida ay dhalinyaradu wajahayso.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahad celiyey Golaha Maamulka ee Bangiga Adduunka (WBG) iyo Hay’adda lacagta (IMF) sida haboon ee ay ula shaqeeyeen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo qorsheyaasha ay gacanta uga gaysanayaan hirgelinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee isku filnaanshaha ah.
Barnaamijka iskaashiga wadajirka ee Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka ayaa salka ku haya kor u qaadista dakhliga, dhisidda awoodda Dowladaha Hoose, kobcinta adeeggyada asaasiga ah ee bulshada, horumarinta ganacsiga iyo taabbo gelinta maalgashi horseeda in si xawli ah dib loogu dhiso hay’adaha dowlada ee muhiimka ah iyo dalka Soomaaliya guuda ahaantiisa.
Wasiir ku xigeenka wasaarada maaliyada Soomaaliya oo warbaahinta qaranka la hadlayay ayaa dhankiisa ka warbixiyay shirka bilaha ah ee 45-tii cisheba hal mar lagu qabto magaalada Muqdisho oo ay isgu yimaadaan dowlada Soomaaliya iyo hay’adaha caalamka ee deeqaha bixiya.
Shirka waxyaabihii ugu weynaa ee looga hadlay waxay ahaayeen hanaanka maamulka iyo maaliyada Soomaaliya,u adkaysiga abaaraha iyo qodobo kale.
Sidoo kale wasiirka ayaa faahfaahinaya mashaariicda bankiga aduunku soomaaliya ka fulinayo iyo qoorshaha awood siinta hay’adaha maaliyada dalka Soomaaliya.
← 21 Shacab ah oo lagu Dilay Duqeymo ka Dhacay Afghanistan
(Dhageyso) Xukuumada Soomaaliya oo Sheegtay inay qar ka mid ah Xildhibaanada ay ka Shaqayn La’dahay. →